Ny fitaovana mety amin'ny fampidirana hery na fanentanana ny mpanao gazety | Martech Zone
Zoma, Febroary 14, 2014 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Meltwater dia mpanohana be ny bilaoginay. Nanao webinar iraisam-pirenena izahay niaraka tamin'izy ireo tamin'ny fihainoana ara-tsosialy izay feno hipoka ary nisy valiny lehibe. Ary efa vonona izahay ny hamoaka ny sary voalohany miaraka amin'izy ireo! Ny mpamatsy vola dia mifantoka amin'ny vokatra News sy Buzz ho an'ny fihainoana nentim-paharazana sy ara-tsosialy, saingy tiako ny hitondra lafin-javatra iray amin'ny vokatra News ho an'ny matihanina amin'ny Fifandraisana amin'ny daholobe izay manao ny fiainako ho toy ny hery miasa mangina taonina mora kokoa…
Ny ankabeazan'ny tolotra azoko avy amin'ireo matihanina amin'ny Fifandraisam-bahoaka dia avy amin'ny adiresin'izy ireo manokana ary misy fanelingelenana manapoizina izay manentsina ny boaty boaty. Ireo olona ireo dia mampiasa fitaovana fitadiavana PR nentim-paharazana izay manisy lisitra ny adiresy mailaka amiko ary mamoaka ilay banga avy amiko izy ireo. Tsy azon'izy ireo ny fomba mametraka mpamaham-bolongana ary matoky aho fa ny mpanao gazety dia kely kokoa noho ny tetikadin'izy ireo.
Mamaly tampoka ireo pitch mahantra na tsy misy ifandraisany amiko aho handraisan'ny olona 5 minitra hijerena raha misy ifandraisany amin'ny mpanjifany ny atiny. Heveriko fa tsy manao an'izany ny ankamaroan'izy ireo satria maika izy ireo ary tsy mieritreritra izy ireo fa misy akony amin'ny zavatra ataony. Fa misy. Ireo olona toa ahy dia mitory azy ireo avy hatrany ho Junk mba tsy hahita pitch hafa ao anaty boaty intsony isika. Tena mampalahelo izany olona PR izany - indray andro any mety nanana toerana tsara ho an'ny bilaoginay.
Omaly, nahazo mailaka mailaka avy amin'ny PR Agency mampiasa Fitaovana fanentanana PR an'ny Meltwater. Tsy holazaiko ny mpandefa satria tsy misy ifandraisany izy ireo - fa ny mailaka dia HTML misy sary ary nanana ny safidy tsara indrindra manerantany - an rohy tsy hisoratra anarana. Ny fipihana io rohy io dia nentina tany amin'ny efijery hafa aho:
Wow, safidy iray hisintahana amin'ireo torolàlana ireo na koa ny tahiry fampahalalam-baovao iray manontolo! Mahery izany, mangarahara ary mitazona ny masoivohon'ny PR sy Meltwater ho tompon'andraikitra amin'izay manararaotra ny rafitr'izy ireo. Ny tena mahaliana kokoa aza dia ny safidin'ny mailaka avy any Meltwater na alefa any amin'ny serivisy mailakao. Izany dia ambaratonga fanampiny amin'ny fandraisana andraikitra satria ny ankamaroan'ny mpanjifa mailaka dia manome fahafaha-mandeha amin'ny adiresy mailaka mandeha ho azy na manakana azy ireo mihitsy aza.
Raha mitarika fifandraisana amin'ny daholobe matihanina ianao na masoivohom-pandraisana asa tanana ary tena maniry ny hanangana fifandraisana (araka ny tokony ho izy) ny ekipanao ary hampamoahina azy ireo, ity no karazana fitaovana ilainao amin'ny fanentanana. Tsy lazaina intsony ny Meltwater dia manana fifandraisana amin'ny haino aman-jery 350,000 ao anaty tahiry miaraka amina fampahalalana iray taonina isaky ny manampy anao hahita ireo influencers sy mpanao gazety mety.
Fampahalalana: ity lahatsoratra ity dia TSY nangatahin'i Meltwater, izaho rehetra io.
Tags: ditymailaka avo lentafitarihana influencersmanangana mpanao gazetyprfifandraisana amin'ny vahoaka